Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Denmark War Deg Deg Ah » Denmark waxay soo afjartay DHAMMAAN xayiraadaha COVID-19 bishii Sebtember 10
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Denmark War Deg Deg Ah • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Denmark waxay soo afjartay dhammaan xayiraadihii COVID-19 10-kii Sebtember
Kala-soociddii ugu dambaysay ee COVID-19 oo ah hanjabaad bulsheed oo muhiim ah ayaa u oggolaatay mas'uuliyiinta deenishka inay ku qasbaan xannibaadaha noocaas ah sida xirashada maaskaro ee qasabka ah iyo shuruudaha 'coronapass', iyo sidoo kale mamnuucidda isu imaatinnada ballaaran ee dalka.
Denmark waxay joojisay inay u kala saarto fayraska “cudur bulsho muhiim u ah”.
Danmark waxay kor u qaadi doontaa dhammaan xannibaadaha la xiriira masiibada bisha Sebtember.
Natiijooyinka togan ayaa ah natiijada “xakamaynta cudurrada faafa”.
Saraakiisha caafimaadka ee Denmark ayaa maanta soo saaray bayaan ay ku dhawaaqayaan inay qaateen go'aan ah inay joojiyaan kala-saaridda COVID-19 inay tahay "cudur bulsho muhiim u ah," maadaama ay gacanta ku hayaan. Go'aanka waxaa loola jeedaa in wax kasta oo sharci ah oo ku saabsan xannibaadaha la xiriira masiibada ay joogsadaan sidaas darteedna dhammaan xayiraadaha waa la qaadi doonaa Sebtember 10.
“Cudurka faafa waa la xakameynayaa, waxaan haynaa heerar tallaal oo sarreeya,” ayaa lagu yiri bayaanka.
In kasta oo natiijooyinka togan ay yihiin natiijada “xakamaynta cudurrada faafa,” xeerar gaar ah oo lagu soo bandhigay Denmark si loola dagaallamo fayraska dilaaga ah ma sii jiri doono laga bilaabo 10ka Sebtember, sida lagu sheegay ku dhawaaqista rasmiga ah.
Kala-soociddii ugu dambaysay ee COVID-19 oo ah hanjabaad bulsheed oo muhiim ah ayaa u oggolaatay mas'uuliyiinta inay ku qasbaan xannibaadahaas sida xirashada maaskaro khasab ah iyo shuruudaha 'coronapass', iyo sidoo kale mamnuucidda isu imaatinnada ballaaran ee Denmark.
"Dowladdu waxay ballanqaadday inaysan sii wadi doonin tallaabooyinka ka badan intii loo baahnaa, halkaasna hadda waan joognaa," ayaa lagu yiri bayaanka, iyadoo lagu daray wax shuruudo gaar ah looma baahnaan doono xitaa dhacdooyinka waaweyn ee dadweynaha, iyo sidoo kale marka la eego marin u helka dalka nolosha habeenkii. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyiintu waxay xaq u leeyihiin inay xoojiyaan xannibaadaha la xiriira COVID "haddii masiibadu mar kale halis geliso shaqooyinka muhiimka u ah bulshada."
"Shaqadii adkayd ma dhammaan, oo eegista adduunka waxay muujineysaa sababta ay tahay inaan u sii wadno feejignaanta," Wasiirka Caafimaadka Denmark Magnus Heunicke ayaa bartiisa Twitter -ka ku qoray, isagoo sidoo kale ammaanay “maareynta cudurrada” ee dalkiisa.
Danmark waxay ka mid ahayd ummaddihii ugu horreeyey ee la kulma xannibaadyo la xiriira masiibada markii baarlamaankeedu meel mariyey amar fulineed oo u kala saarayay cudurka inuu khatar weyn ku yahay bulshada bishii Maarj 2020. Xiritaan qayb ahaan ah ayaa dib loo soo saaray markaa, iyadoo xeerarka cusub markii dambe lagu daray, dabciyey , oo la xoojiyay intii uu socday aafadu. Dhammaadkii bishii Ogosto, in ka badan 70% dadka dalka ayaa si buuxda loo tallaalay. Denmark waxay diiwaangelisay in ka badan 342,000 xaaladood oo fayraska ah, iyada oo in ka badan 2,500 oo qof ay u dhinteen.